Ọrụ Google na-agbakwunye ọnọdụ gbara ọchịchịrị na wijetị | Gam akporosis
Ọrụ Google na-agbakwụnye ọnọdụ gbara ọchịchịrị na wijetị
Ka izu na-aga kemgbe mmalite nke gam akporo 10, nnukwu ọchụchọ ahụ na-aga n'ihu na-arụ ọrụ imeghari ka ọchịchịrị mode nke weputara nsụgharị a, na ngwa ndị anabatabeghị ya, onye na-esote ịnata ọrụ a bụ ngwa Google Tasks.
Google weputara ngwà Ihe aga-eme na Eprel nke afọ gara aga ma kemgbe ahụ ọ nọ na-agbakwunye ndozi dị iche iche dị ka ohere nke ịtọọ oge ọrụ na ncheta, njikọta Gmail na ụzọ mkpirisi. Ihe omuma ohuru nke gha abia na nwelite 1.7 nke ngwa a gha abuba ochichiri, onodu ochichiri nke anyi gha eme ka aka gi ghara iru.
Site na ịpị bọtịnụ atọ dị na akuku aka nri ala, ụdị nke ugbu a na-enye anyị ohere ịhazi ọrụ ahụ dịka ha siri guzobe ma ọ bụ site na ụbọchị. 1.7.dị XNUMX, nke na-achọ ịkụ Play Store, ọ bụghị naanị na-agbakwunye ọrụ a na igbe ndọda, kamakwa ọ na-agbakwunye nhọrọ Okwu. Site na ịpị a nhọrọ anyị nwere atọ nhọrọ ịhọrọ site na: ìhè, ọchịchịrị na ndabara usoro.
Dị ka anyị na-ahụ na ngwa niile Google emegharịrị ka ọnọdụ ọchịchịrị, ndabere nke ngwa ahụ adịghị oji, mana ọ bụ agba ọchịchịrị. Ọ bụ ezie na nke ya ga-abụ ịnwe agba ojii, taa enweghi ọtụtụ ọnụ na-ekpori ndụ na ihu igwe nwere teknụzụ OLED, teknụzụ nke na-enye anyị ohere ịchekwa nnukwu batrị mgbe anyị na-eji ngwa na-egosi nzụlite ojii, ebe ngosi ahụ naanị ọkụ ndị LED na-egosipụta agba na-abụghị oji.
Ihe omuma ohuru nke gha abia site na aka nke nwelite ozo nke ngwa (ugbu a na APK Mirror). Enwere ike ịchọta ihe aga-eme na wijetị, wijetị nke kwesịrị ịdịrịrị kemgbe ewepụtara ụdị izizi. Ngwaọrụ a ka anyị tinye ihe aga-eme na-enweghị na-emeghe ngwa a na-egosipụtakwa ya na agba nke anyị guzobere na sistemụ, ọ bụghị na ntinye.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Ọrụ Google na-agbakwụnye ọnọdụ gbara ọchịchịrị na wijetị
Ihe ngosi Xiaomi Mi 10 ga-ebido na njedebe nke Ọktọba
Nlekọta Ndị Dijitalụ na Ihe Nlekọta Nchekwa Kachasị Anya abịarute na Realme X Site na Mmelite Ọhụrụ